Xog Ku Saabsan Ninkii Weerarka Ka Gaystay Faransiiska | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Xog Ku Saabsan Ninkii Weerarka Ka Gaystay Faransiiska
Ninkii ku toorriyeey labada gabdhood iyo ninka tan iyo ilaa inta ay ka dhinteen kaniisad ku taal dalka faransiiska ayaa la sheegay in uu ka yimi uun maalmo ka hor dalka Tuniisiya.
Eedeysanahan oo 21-jir ah ayaa watay Dukumenti Laanqeyrta Cas ee Talyaanigu oo la siiyey ka dib markii uu Doon Tahriibayaal ku yimid Jesiiradda Lampedusa ee Talyaaniga bishii la soo dhaafay. Waxaa toogtay booliska, waxa uuna hadda ku sugan xaalad halis ah.
Mid ka mid ah dhibbanayaasha weerarkii Khamiistii ka dhacay Notre-Dame basilica ee magaalada Nice ayaa “gebi ahaanba uu qoorta ka gooyay”.
Madaxweyne Emmanuel Macron ayaana ku tilmaamay falkan “weerar argagixiso oo Islaami ah”.
Dilkaas ayaa sare u qaaday xiisadaha ka taagan Faransiiska. Difaaca Mr Macron ee xuquuqda daabacaadda kartoonada iyo iskudayada dowladda ee ku aaddan la dagaalanka islaamka ah ayaa ka cadheysiiyay Turkiga iyo wadammo kale oo muslimiin u badan.